के तपाईलाई थाहा छ ? बच्चा जन्माउन उत्तम महिना कुन हो ? – Krazy NepaL
April 20, 2021 984
तर, मानवमात्र यस्तो प्रााणी हो जसले अन्य कुराको जस्तै यौ न जीवनलाई प्रकृतिको नियन्त्रणमा रहन दिएको छैन । पछिल्लो समय मानिसले सन्तान जन्माउने उत्तम समय कुन हो भन्ने बारेमा विभिन्न बहस हुन थालेका छन् । ति बहस अनुसार वैज्ञानिकहरुले सन्तान उत्पादनका लागि उपयुक्त समय कुन भनेर अनुसन्धान थालेका छन् ।
यही भएर वैज्ञानिकहरुको ध्यान पनि कहिले बच्चा जन्माउँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन, ‘बच्चा ग-र्भाधारणको लागि सबैभन्दा उपर्युक्त समय डिसेम्बर र जनवरी महिना हो ।’
अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन् । अध्ययन टोलीले जुनमा ग-र्भाधारण नगर्न पनि सबै दम्पत्तीलाई सुझाब
जनवरी र डिसेम्बरमा ग-र्भवती हुने महिला ग-र्भाअवस्थाको अन्तिम समयमा उच्च मात्रामा सूर्यको प्रकाश पाउने अध्ययन टोलीका प्रमुख डा पउल विनचेस्टरको भनाई छ । आमाले लिएको तापक्रममार्फत प्राप्त हुने भिटामिन डीले शिशुलाई स्वस्थ बनाउने उनीहरुको तर्क छ । जुन महिनामा गर्भाधारण स्वास्थ्यका लागि हा-निकार हुने उनीहरुको दाबी छ ।
गर्मी मौसमा खेतीपातीमा प्रशस्त मात्रामा वि-षाधीको प्रयोग हुने र हावामार्फत त्यसको असर ग-र्भधारण गर्ने महिलामा पर्ने उनीहरुको तर्क छ । अध्ययन टोलीले डिसेम्बरमा ग-र्भाधारण गरी सेप्टेम्बरमा बच्चा जन्माउने अभिभावकको संख्या बढी भएको जनाएको छ । ‘र-सायनको मौसमी प्रभाव र आईभीएफ ग-र्भधारणमा भिटामिन डीको प्रभावबारे पछिल्लो समयमा चासो बढेको छ ।’ अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन् । अध्ययन टोलीले जुनमा ग-र्भाधारण नगर्न पनि सबै दम्पत्तीलाई सुझाब दिएको छ ।
Prevयी ११ संकेत देखिए २०७८ साल शुभ रहनेछ
Nextनागको अन्डा देख्ने मान्छेको भाग्य चम्किने ?
यी हुन् १५ मिनेटमै अनुहारको चमक बढाउने घरेलु उपाय
यी हुन् प्रेममा कहिल्यै धोका नदिने ५ राशिका युवती